जब अप्रेशन थिएटरमै डाक्टरले नर्सलाई किस गरेपछि एकाएक भिडियो भाईरल , हेर्नुहोस्…::Nepal's Online News Portal
जब अप्रेशन थिएटरमै डाक्टरले नर्सलाई किस गरेपछि एकाएक भिडियो भाईरल , हेर्नुहोस्…
एजेन्सी । यतिबेला भारतमा एउटा भिडियो भाईरल बनेको छ । अप्रेशन थिएटरभित्र एक डाक्टरले नर्सलाई किस गरिरहेको भिडियो भाईरल बनेको हो । मध्यप्रदेशमा उज्जेनको जिल्ला अस्पतालमा एक सिभिल सर्जनले सहकर्मी नर्सलाई चुम्बन गरेका हुन् ।
चुम्बन गरेपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ । ती सिभिल सर्जन र नर्सको चुम्बन गरिरहेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि उनीहरुलाई पदबाट हटाइनुपर्ने माग अत्यधिक बढेको बताइन्छ । यसमा तत्काल कारवाही गर्दै उज्जेन जिल्लाका ‘कलेक्टर’ ले डाक्टरलाई पदबाट बर्खास्त गरेका हुन् ।
ति सिभिल सर्जनको सट्टामा डा. पिएन वर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । अप्रेशन थिएटरमा चुम्बन गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मोहन मालवीयले घटनालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसको अनुसन्धानको आदेश दिइएको जानकारी दिए ।